Izindaba - Uyini umehluko ekubonisweni kwe-LED, i-LCD, i-Projector ne-DLP?
I-LED yi- “Light Emitting Diode”, iyunithi encane kunazo zonke ingu-8.5 inch, ingakwazi ukugcinwa kwe-pixel nokuguqulwa kwemodyuli yeyunithi, isikhathi sempilo ye-LED ngaphezu kwamahora angama-100,000.
I-DLP iyi- "Digital Light Procession" elingana no-50inch ~ 100inch, isikhathi sokuphila cishe ngamahora ayi-8000. Udinga ukumiselela ngokuphelele uma isibani sephrojekthi nephaneli kunenkinga.
1. Ukuguquguquka kwemvelo kokukhanya
Ukukhanya kwesibonisi se-DLP \_ LCD akuphezulu. Ukugqama kwe-ambient kukhawulwe ngokuqinile, okungafanelekile ihhovisi le-brighness ephezulu noma indawo yokulawula igumbi.
Ukukhanya kwesibonisi se-LED kungashintsha phakathi kwe-600-1500cd, i-suit yemvelo ehlukahlukene.
2. Isimo esibonakalayo
Isibonisi se-LCD, ngaphambili ifakwe iphaneli yomhlahlandlela oguqukayo noma okhanyayo.
I-DLP kwisicelo esisebenzayo, izoba nomphumela ocacisayo.
I-LED ngoba iyiyunithi yokukhanya okuzenzekelayo, nephaneli emnyama emnyama matte, ebusweni besibani esimnyama esimnyama, ngakho-ke ukubonakaliswa kombala kwanoma iyiphi i-engeli kungagcinwa kuphelele.
3. buka engela qhathanisa
4. Khombisa umphumela qhathanisa
5. qhathanisa isilinganiso qhathanisa
I-LED isebenzisa isibani esimnyama esiholelekile, indawo yesikrini uhlobo lohlobo lokumunca. cishe awukho umugqa oqondile obonisa ukukhanya, ngakho-ke isilinganiso sokuqhathaniswa kwesikrini se-LED sifike ku-4000: 1, senza isikrini sokubonisa se-LED sicijile futhi sicace.
Iningi le-DLP projector ratio lingaba ngu-600: 1 kuye ku-800: 1, intengo ephansi futhi ingaba ngama-450: 1. LCDD iphrojektha yokulinganisa isilinganiso cishe ingu-400: 1, kanti intengo ephansi ingama-250 kuphela engu-1.
Udonga lwevidiyo ye-DLP
I-DLP kuzidingo zemvelo ziphakeme kakhulu, njengokushisa, umswakama, uthuli, ukukhanya, njll., Ikakhulukazi isikrini yiso esisengozini enkulu, ukuklwebha umugqa omncane ngeke kusulwe futhi kulungiswe, kuningi okunzima akuyona isikhathi isikhathi esizophinda siyifunde kabusha, ngaphandle kwalokho isithombe sizosusa ngokuzenzakalela. Umehluko wangempela we-DLP uphansi kakhulu, ubonakala ebumnyameni obukhona bokukhubazeka okucacile, okungukuthi, izithombe eziningi zezigcawu ezimnyama azicaci, le nto isobala impela. Njengokuthi incwadi yokubhalela ingabona indawo emnyama, esikrinini se-DLP kokumnyama, ayikwazi ukuhlukanisa, ngakho-ke uma isetshenziswa ekuqapheni izithombe, ikhwalithi yesithombe izokwehliswa kakhulu. Ubuthakathaka bephrojektha ye-DLP eyodwa kuphela, okusho ukuthi, “umphumela wothingo”, ukusebenza okuthile kumane kwehlukaniswe nombala we-monochrome ebomvu, eluhlaza noluhlaza okwesibhakabhaka, kubukeka njengemvula yothingo.
Udonga lwevidiyo ye-LCD
Ububi obusobala be-LCD projektha ukuthi izinga elimnyama liphansi futhi umehluko awuphakeme kakhulu.Umbala omnyama we-projektha ye-LCD uhlala ubukeka mpunga, futhi ingxenye efiphaziwe imnyama futhi ayinayo imininingwane.Lokhu akulifanele neze ividiyo yokudlala, okuyinto engeyinhle kakhulu kubhayisikobho, kepha akuyona umehluko omkhulu nge-projektha ye-DLP lapho udlala amagama.Impendulo yesibili ukuthi umphumela we-LCD projektha ukhombisa ukwakheka kwe-pixel, futhi umbukeli ubukeka ngathi ubuka isithombe ngethoba . Ifomethi ye-SVGA (800 x 600) yephrojektha ye-LCD, ngaphandle kobukhulu besithombe sesikrini, ingabonakala ngokusobala kugridi ye-pixel ngaphandle kokuthi kusetshenziswe umkhiqizo wokulungiswa okuphezulu. I-LCD manje isiqale ukusebenzisa i-micro lens array (MLA), ingathuthukisa ukusebenza kahle kokudluliswa kwefomethi ye-XGA yamaphaneli we-LCD, ukusabalalisa kwamaphikseli, igridi ye-pixel ecashile futhi engabonakali, futhi ubukhali bezithombe ngeke bulethe nethonya. Inganciphisa ukwakheka kwe-pixel ye-LCD icishe ifane namaphrojektha we-DLP, kepha kube yigebe kancane.
HD LED inzuzo
Isikhathi esingaphezu kwamahora we-100,000 wempilo
Ukusebenza kombala okungu-3
2.Superior ukushisa ukushabalalisa ukusebenza
Izindleko zokugcina ezisezingeni eliphansi
1.More than10 0000 isikhathi sempilo
Ubuso obukhanyayo buhlanganisiwe, isakhiwo sepuleti se-aluminium, Ukushiswa komzimba ukushisa komzimba wonke, kungaba ukushabalalisa okuhle kakhulu kokushisa ；
Ukusabalalisa ukushisa kwephrofayili yeFlank: Ukushisa ebhokisini kuhlakazekile kusuka ezinhlangothini, bese uxhuma amaphaneli, Egobolini elingemuva ezinhlangothini zombili zokwakheka kwamashaneli aphezulu nangaphansi, ukusetshenziswa kwengcindezi yomoya ukwakha umoya ophezulu nophansi umjikelezo wokujikeleza, ukushabalalisa ngokuphelele ukushisa.
Isimiso sokubonisa sokukhanya okuzenzakalelayo kwe-RGB sigcina ubuqiniso bombala, sigweme ukulahleka kombala nokuphambuka okubangelwa yilokho okusebenzayo nendlela elula yokusebenza kubuchwepheshe bokukhanyisa emuva nokuqagela.
I-YWTLED All In One LED - I-TV iyunithi yokukhanya okuzenzekelayo, enephaneli emnyama engezansi emnyama, ubuso obumnyama bobuhlalu, ukuze ukusebenza kombala kwanoma iyiphi i-engeli ebonakalayo kungagcinwa kuphelele.
Iyunithi ejwayelekile ye-LED, iphaneli yokubonisa yakhiwe ngamayunithi amancane; amaphikseli wokubonisa akhiwe ngamalambu e-LED ngamanye.
Uma kunephuzu le-necrotic, esikhundleni salo ngeyunithi yokulungisa bese ulungisa isibani se-LED ；
Uma iphaneli ibonakala ingatholakali, iphaneli elincane lokubonisa lingashintshwa ；
Isibonelo, indawo yokubonisa engama-intshi angama-32 ingu-4% kuphela wepaneli yendabuko.
Okujwayelekile manje kuyunithi le-splice unit engu-46-intshi, 55-intshi, no-60-intshi, enezindleko eziphansi ezilinganiselwe.
I-LED akukho mehluko ngemuva kokulungiswa kweyunithi
Lapho esikhundleni LED olulodwa, ungakhetha isibani LED agodliwe ekukhiqizeni. nokulungiswa kwephuzu elilodwa lokukhanya kungenziwa ukuligcina lingaguquguquki ；
Lapho ushintsha imodyuli yeyunithi, imodyuli ephelele namapaneli asetshenziselwa ukulungisa okungaguquguquki, ukuze izinga lokushisa kombala nokukhanya kuhambisane nesimo samanje sesikrini sephrojekthi.
Udonga lwevidiyo ye-LCD Umehluko omkhulu ngemuva kokulungiswa kweyunithi
Umbala weyunithi emiselayo nokukhanya konke kuyisimo esisha, akukho kuncishiswa, kufane kakhulu futhi kukhanya ；
Futhi amanye amayunithi wangempela, ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside, ukuncipha kokukhanya kanye nesikrini nezinye izinto, njengokufaka amandla komoya oluyimpuphu okhanyayo, umbala, nokukhanya kwehle kakhulu ；
Kunokwehluka okuphawulekayo emiphumeleni yokubuka ephelele.